Soo-saareyaasha Macdanta & Alaab-qeybiyeyaasha Is-bedbeddelaya - Shiinaha
JSG-Nooca Kobcinta Kobcinta
Tuubada JSG waa silig bir birta ah oo galvanized ah oo leh caabbinta daxalka wanaagsan ee lagu xiray xudunta derbiga tuubada JS, waxayna leedahay iska caabin kuleyl wanaagsan, oo loo isticmaalo deegaanka heerkulka sare.
Dhismayaasha dariiqada biraha dhogorta ee PVC / PU waa marinka biraha birta ah ee rinjiga lagu duubo, wareejinta sheyga PVC iyo Zinc dahaarka suunka birta lagu xidho, qaabdhismeedka xargaha, TPU sheathing. Ololka-celiyaha waa V0 (UL94). Darajada ilaalinta waa IP68.
Sharax kooban Shahaadada ilaalinta waa IP40. Astaamaha marinka biraha waa mid jilicsan, kala fidsan, iskudirid dhinaca dambe ah. Qaab-dhismeedka waa nabar nabar bir ah oo zinc lagu dhejiyay, muuqaal ku xirmay iyo marin-biraha macmalka ah ee maqaarka lagu duubay
Tuubada birta ahama ee birta ah waa qayb muhiim u ah warshadaha casriga ah. Tuubbooyinka birta ahama ee biraha aan xarka lahayn ayaa loo isticmaalaa sida siligga iyo tuubooyinka ilaalinta fiilooyinka ee fiilooyinka, fiilooyinka, astaamaha qalabka otomaatiga ah, iyo tuubbooyinka qubeyska madaniga ah, oo leh faahfaahin ka kooban 3mm ilaa 150mm. Mashiinka birta biraha-dhexroorka yar-yar (dhexroor hoose oo ah 3mm-25mm) waxaa badanaa loo isticmaalaa ilaalinta wareegga dareemayaasha ee xukunka saxda ah ee saxda ah iyo ilaalinta wareegga dareeraha warshadaha.
Bixiyaha Birta Iyadoo Sheathing PVC
Tuubooyinka difaaca ee loo isticmaali jiray in lagu xidho fiilooyin iyo fiilooyin meelo kala duwan ayaa guud ahaan tuubooyin bir ah oo dahaaran PVC-olol, oo aan difaaci karin oo keliya fiilooyinka iyo fiilooyinka, laakiin sidoo kale ka hortagi kara daadashada dhimbiil ee korontada; waxay sidoo kale diyaarin karaan khadadka oo ay ku guuleysan karaan saameyn qurux badan.
Bixinta Qalabka Birta ee PU Sheathing
Tuubbooyinka birta ee dahaarka leh ee balaastigga ah ayaa laga sameeyay tuubbooyin bir bir ah iyo tuubbooyin bir ah oo galvanized ah, oo lagu dahaadhay lakab ka kooban walxaha PU oo ay weheliso xuubka iyo dusha sare ee xuddunta darbiga tuubbada. Sababtoo ah faa'iidooyinka miisaanka fudud, dabacsanaanta wanaagsan, xoogga isku xirnaanta qalabka, waxqabadka korantada, caabbinta saliida, iska caabbinta biyaha, iwm. warshadaha kale.